The Certificate Course in Advanced Diplomatic Skills (ADS – 4/2016) was inaugurated at the Ministry of Foreign Affairs – Ministry of Foreign Affairs
The Certificate Course in Advanced Diplomatic Skills (ADS – 4/2016) was inaugurated at the Ministry of Foreign Affairs
U Soe Lynn Han, Director-General of Strategic Studies and Training Department at the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of the Union of Myanmar, delivered opening remarks at the Opening Ceremony of the Certificate Course in Advanced Diplomatic Skills -ADS (4/2016) held at the Wunzinminyarzar Hall of the Ministry, at 10:00 am today.
At the occasion, former Myanmar Ambassadors, Directors-Generals and seniors officials from the Ministry, faculty members of Universities and experts from other Ministries and institutions were attended.
Ministry of Foreign Affairs is carrying out its duties in enhancing capacity of private and public sectors by conducting the basic diplomatic trainings. With this objective,the Certificate Course in Advanced Diplomatic Skills (ADS) is conducted and targeted for graduates of the Certificate Course in Basic Diplomatic Skills (BDS).
This course is designed to provide up-to-date and emerging issues which will be lectured by instructors, professors and senior diplomats. Fifty participants attend the Certificate Course in Advanced Diplomatic Skills for seven weeks.
Dated 17thOctober 2016
အဆင့်မြင့် သံတမန်ရေးရာ ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၄/၂၀၁၆)၏သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ
အဆင့်မြင့်သံတမန်ရေးရာ ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၄/၂၀၁၆)၏ သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက်(၁၀:၀၀)တွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ဇင်းမင်းရာဇာခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မဟာဗျူဟာလေ့လာရေးနှင်‌့လေ့ကျင်‌့ရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးစိုးလင်းဟန်မှ တက်ရောက်၍ သင်တန်းဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနားသို့ အငြိမ်းစားမြန်မာသံအမတ်ကြီးများ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အရာရှိကြီးများ၊ တက္ကသိုလ်များမှ ပါမောက္ခ/ဌာနမှူးများ၊ ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် သံတမန်ရေးရာကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းများကို ပုံမှန် ဖွင့်လှစ်ပေးလျှက်ရှိပြီး ပြင်ပပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍများ၏ အရည်အသွေးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်များကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ မြှင့်တင်ပေးလျှက် ရှိပါသည်။ အဆင့်မြင့်သံတမန်ရေးရာ ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်းများကို အခြေခံသံတမန်ရေးရာ ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးနောက် သံတမန်ရေးရာဘာသာရပ်များကို ပိုမိုလေ့လာလိုသူများအတွက် ရည်ရွယ်၍ ဖွင့်လှစ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါသင်တန်းတွင် သင်တန်းသား/သင်တန်းသူ (၅၀)ဦးတက်ရောက်မည်ဖြစ်ပြီး သင်တန်းနည်းပြ ဆရာကြီး/ဆရာမကြီးများ၊ ပါမောက္ခများနှင့် ဝါရင့်သံတမန်များမှ လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်နေသော မျက်မှောက်ခေတ်ရေးရာများနှင့် သံတမန်ရေးရာဘာသာရပ်များကို သင်တန်းကာလ(၇)ပတ်အတွင်း လေ့ကျင့်သင်ကြား ပို့ချပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်